Ịgụ Oge: 2 nkeji Everybọchị ole na ole ọ bụla, mụ na nwa m nwanyị na-ese okwu banyere onye nwere ụdọ. Achọrọ m eriri m, ọ na-ahapụkwa ụdọ ya n'ụgbọ ala ya. Ọ bụrụ na anyị ntị bụ ma ala ka otu ọbula ụgwọ percentages… kpachara anya! Ekwentị anyị abụrụla akụkụ nke mmadụ anyị. Ọ bụ ihe jikọrọ anyị na ndị enyi anyị, onye na-edekọ ihe nchekwa dị ugbu a, enyi anyị na-echetara anyị ihe anyị ga - eme, na ọbụlagodi
Ịgụ Oge: <1 nkeji M na-aghọta na e nwere ụfọdụ ugboro ugboro ebe a na ụfọdụ n'ime posts m na-ekere òkè na ebe m kwenyere marketers kwesịrị ilekwasị anya ha anya nke afọ a… ma a infographic chịkọtara ya elu ma mma oke ghara ịkọrọ! Afọ 2014 - ịre ahịa dijitalụ eruola ọkwa ọhụrụ ma na-aga n'ihu na-eme ya. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na - ere ahịa ka na - eche - “Kedu ihe ga - emetụta mbọ m na - agba n’ahịa n’afọ a na
Ịgụ Oge: 2 nkeji Afọ a ọ tara gị ara? Ọ meere m. Ọ bụ afọ siri ike dịka nna m nwụnahụrụ m, ahụike m tara ahụhụ, ma azụmaahịa ahụ nwere obere nsogbu - gụnyere nkewa na ezigbo enyi na onye otu m. Fol na-agụ akwụkwọ m na-agụ blọgụ m maka ozi ahịa ka m wee ghara ilekwasị anya na nsogbu ndị ọzọ (ọ bụ ezie na ha nwere nnukwu mmetụta), Achọrọ m ịgwa ndị ahịa na ahịa teknụzụ okwu ozugbo. Ahịa na 2013
Ịgụ Oge: 5 nkeji Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịkọ amụma Gartner nke teknụzụ 10 kacha elu maka 2011… yana etu amụma niile si emetụta ahịa dijitalụ. Ọbụna ọganihu na nchekwa na ngwaike na-emetụta ikike nke ụlọ ọrụ iji soro ndị ahịa kerịta ma ọ bụ kesaa ozi na atụmanya ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma. Top Ten Technologies maka 2011 Cloud Computing - Cloud Mgbakọ na kọmputa ọrụ adị tinyere a ụdịdị dị iche iche site na-emeghe ọha na eze na-emechi nzuzo. Afọ atọ sochirinụ ga-ahụ nnyefe ahụ
Ịgụ Oge: 3 nkeji Anyị juputara na ozi sitere na mgbasa ozi mmekọrịta, ọchụchọ na igbe ozi anyị. Mpịakọta na-aga n'ihu na-arị elu. Enweghị m ihe na-erughị 100 iwu na igbe mbata m iji zipu ozi na ozi ọma. Kalenda m na agakọrịta n’etiti Blackberry, iCal, Kalịnda Google na Tungle. Enwere m Google Voice iji jikwaa oku azụmaahịa, yana MMail jikwaa ịkpọ oku na ekwentị m. Joe Hall dere taa na nchegbu nzuzo na iji data nkeonwe Google nwere ike